के कुरा भयो राजकुमार ह्यारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 08:48:09
जापानी समय : 12:03:09
के कुरा भयो राजकुमार ह्यारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच ?
12 June, 2019 12:10 | पत्रपत्रिका | comments | 24900 Views
नेपालबाट १७ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीस्तरको बेलायत भ्रमण भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २००२ मा भ्रमण गरेको १७ वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेलायत भ्रमण गरेका हुन् ।
लन्डनमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजकुमार ह्यारी र समकक्षी थेरेसा मेसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका छन् । ओलीलाई केन्सिङटन प्यालेसमा स्वागत गर्दै ह्यारीले नेपालको पुनर्निर्माणबारे चासो राखेका छन् । ह्यारीले नेपाली जनताको प्रशंसा गरेको भेटवार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ह्यारीलाई पुनः भ्रमणको निमन्त्रणा दिँदै नेपालप्रति बेलायतको राजपरिवारले देखाउँदै आएको सद्भावको प्रशंसा गरेका थिए ।
बेलायतका राजकुमार ह्यारीले नेपाल भ्रमणका क्रममा ६ चैत ०७२ मा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए । ह्यारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि नेपालका ग्रामीण बस्तीमा आफैँ सहभागी भएर श्रमसमेत गरेका थिए । उनले नेपालीको माया र सद्भावको प्रशंसा गरेका थिए । लन्डनमा प्रधानमन्त्रीले बेलायतका सांसदहरूको समूहसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई बेलायतस्थित गैरआवासीय नेपालीले सम्मान गरेका छन् ।
समकक्षी मेसँग भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी थेरेसा मेसँग १० डाउनिङ स्ट्रिटस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्दै मेले नेपालको विकास र पुनर्निर्माणमा बेलायतको सहयोग जारी रहने बताएकी छिन् । भेटमा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार मेले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण, नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे चासो राखेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको बेलायतसँगको सबन्ध उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । ओलीले अवकाशप्राप्त गोर्खाको समस्याबारे चासो राख्दै सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
ओलीले समकक्षी मेलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितियालाई पठाएको औपचारिक निमन्त्रणापत्र पनि दिएका छन् । भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी थिए ।
अक्सफोर्डमा सम्बोधन : भारत र चीन असल मित्र
प्रधानमन्त्री ओलीले लन्डनको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलाई सम्बोधन गरेका छन् । उनले आफू ५० वर्षदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भएको र १४ वर्ष जेल बसेको पटक–पटक दोहोर्‍याएका छन् ।
हामी दुई विशाल छिमेकीबीचमा छौँ । हाम्रा लागि यो सहज परिस्थिति हो, किनभने दुवै हाम्रा असल मित्र हुन् । दुवै राम्रा बजार हुन् । एक–अर्कामा तटस्थता हाम्रो नीति हो । अधिकार र कर्तव्य सन्तुलन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । लोकतन्त्र र विकासका आ–आफ्नै ढाँचा हुने पनि उनले व्याख्या गरे । उनले राजतन्त्रलाई वंशपरम्परामा आधारित र जन्मँदै माथिल्लो स्थानमा रहेको भन्दै नेपालले जनआन्दोलनको दुई वर्षपछि उन्मूलन गरेको बताए । उनले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाधान गर्दै नेपालले सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोगाएको पनि उल्लेख गरे ।
‘राजनीतिक बहुलता, आवधिक निर्वाचन, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार, प्रेस तथा वाक् स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, शक्तिसन्तुलनका विशेषतामा आधारित लोकतन्त्रको अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
नेपालको सबैभन्दा पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसँग स्थापित भएको हो । तर, बेलायतबाट प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म नेपाल आएका छैनन् । बेलायतको राजपरिवारका सदस्य राजकुमार ह्यारी तीन वर्षअघि ०७२ चैतमा भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ नेपाल आएका थिए । ह्यारीका हजुरबा बेलायतका राजकुमार फिलिप ०५७ कात्तिक २९ देखि चारदिने निजी भ्रमणमा आएका थिए । ह्यारीका पिता राजकुमार चार्ल्स त्यसको तीन वर्षअघि ०५४ माघ २४ गते औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए । त्यसपछि त्यो स्तरमा औपचारिक भ्रमण भएको छैन ।
त्यसअघि बेलायतकी राजकुमारी डायनाले ०४९ फागुन १९ देखि २३ गतेसम्म नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यसअघि बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितिया ०४३ मा आएकी थिइन् । ०४३ पछि बेलायतको राष्ट्रप्रमुखबाट नेपाल भ्रमण भएको छैन । बेलायतबाट सांसद र स्थल सेनाध्यक्षको भ्रमण बाक्लै भए पनि राजनीतिक भ्रमण भएको छैन ।
दौत्य सम्बन्धको दुईसय वर्षमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन् । नेपालले हरेक प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्ता दिएको छ, तर बेलायतका प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नेपाल परेको छैन । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ०७२ पुसमा बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई भेटेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट भ्रमणको निम्ता दिए । तर, उनी आएनन् ।
नेपालका तर्फबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलले ०६० भदौ १० देखि २१ सम्म बेलायतको निजी भ्रमण गरेका थिए । गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रप्रमुखको स्तरबाट भ्रमण भएको छैन । राजा वीरेन्द्र सन् १९८० मा राजकीय भ्रमणमा गएका थिए । उनी सन् १९९५मा दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यको पचासौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन बेलायत गएका थिए । उनीअघि राजा महेन्द्रले सन् १९६० मा राजकीय भ्रमण गरेका थिए भने सन् १९०८ मा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर र उनीअघि जंगबहादुरले राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।
पछिल्लोपटक सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले बेलायतको औपचारिक भ्रमण गरे भने सन् १९९५ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि बेलायत भ्रमण गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् १९९६ र २००२ मा दुईपटक बेलायत भ्रमण गरेका थिए । २००२ मा उनको भ्रमण औपचारिक थियो । तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगाना सन् १९९३ मा र तारानाथ रानाभाट १९९९ मा औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधव नेपालले सन् १९९५ मा बेलायत भ्रमण गरे । नेपालले विपक्षी नेताको हैसियतमा २००२ मा पनि बेलायत भ्रमण गरेका थिए ।
तस्बिर : द रोयल फ्यामिली र लण्डन नेपाल न्युज कम
बेलायतमा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तता- प्रधानमन्त्री र राजकुमार ह्यारीसंग भेटवार्ता